Ukufunyanwa kweDomain: Ulawulo lweShishini lweeaseti zeDomain | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 8, 2016 URussell Artzt
Isiphithiphithi sihlala kwindawo yedijithali. Nayiphi na inkampani inokulahleka ngokulula kwii-asethi zayo zedijithali ngexesha apho ukubhaliswa kwesizinda kwenzeka ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kwaye xa ukudityaniswa kunye nokufunyanwa kusoloko kongeza iiwebhusayithi ezintsha kumxube.
Imimandla ebhalisiweyo kwaye ayikaze iphuhliswe. Iiwebhusayithi ezihamba iminyaka ngaphandle kohlaziyo. Imiyalezo exubileyo kumaqonga entengiso. Iindleko ezingafunekiyo. Imali elahlekileyo.
Iindawo zedijithali zeenkampani zihlala ziguquka, kwaye ukugcina umkhondo kunokuba nzima, ukuba akunakwenzeka.
Iinkampani ezininzi sele zixakekile kule ngxaki yedijithali.
Cinga inkampani eye yazama ukubhalisa indawo ethile kwaye yafumanisa ukuba sele ithathiwe. Ukujonga iwebhusayithi, abaphathi babona umxholo ojongeka kakhulu njengeempawu zabo kunye neempawu zabo zorhwebo kwaye ngokukhawuleza isebe labo lezomthetho lilungiselela uhlaselo olubi - kuphela ukufumanisa ukuba i-domain ibhalisiwe kwinkxaso-mali esandula ukufunyanwa.
Kuyaqondakala ukuba, inkampani yayixhalabile ukuba ubuqhetseba buqhubeka, kwaye ngebabeye kwiindleko ezinkulu ukulwa nalo kuba babengenalo nofifi lokuba bangabanini ngalo lonke elixesha.
Lo ngumzekelo wesiphithiphithi esikhoyo kwihlabathi ledijithali. Kunzima kakhulu ukulandela yonke into, kuyo yonke indawo, kunye nokuqonda ngokupheleleyo into onayo. Idala ukudideka kwaye iya kuphelisa iindleko zeenkampani.
Kukho eminye imingcipheko ejongene nentengiso yedijithali yale mihla kubandakanya nabasebenzi abanobuqhophololo abaphuhlisa imimandla i-C-suite ayazi malunga nayo okanye ibeka umxholo ongekho mgangathweni kwiziteshi zenkampani ezisemthethweni.
Kungenzeka ukuba abasebenzi baqhuba ishishini labo ecaleni kwindawo ebhaliswe kwinkampani. Banokuba babhalise ngokwahlukeneyo kodwa babandakanye iimveliso zenkampani okanye iilogo. Iinkampani zithatha ngokungakhathali bayazazi ngqo izinto abanazo ngokwamanani, kodwa kuqhelekile ukuba abazi.
Imingcipheko eyongezelelweyo ibandakanya amatyala angalindelwanga- into etshabalalisayo yokuba isiqwenga somxholo kwezinye iwebhusayithi ezingaziwayo zinzulu kwipotifoliyo yenkampani engaqwalaselwanga inokubangela ingxaki.
Ukuba awulawuli kwimimandla yakho, uyazi njani ukuba ikuphi kubo? Ukuba umsebenzi okhohlakeleyo okanye iarhente engagunyaziswanga ibhalisa isizinda kwigama lakho lenkampani kunye neposti yolwazi olungachanekanga okanye oluchanekileyo, unokuba noxanduva.
Kukho umngcipheko wokuba inkampani ikhuphisane nayo-ingashiyi nje i-SEO kunye nobunye ubuchwephesha bokuthengisa obuluqilima etafileni, kodwa isenzakalisa iiyunithi zeshishini ngalinye ngokungazicwangcisi ngenjongo.
Umzekelo, yithi uthengisa iintlobo ezintathu zewijethi, zonke zakhiwe ngokwamaqela ahlukeneyo enkampani yakho. Ukuba ukupapasha oku ngokufanelekileyo, iinjini zokukhangela ziya kukubona njengesixhobo samandla sewijethi kwaye zikutyhalele phezulu kuluhlu lwazo. Kodwa ngaphandle kolungelelwaniso, iinjini zokukhangela zibona iinkampani ezintathu ezikhutshiwe ngokupheleleyo, kwaye endaweni yokufumana amandla kubungakanani bakho, uzinkqonkqoza umva.
Zonke ezi zinto-ukusuka kwinkcitho yeerejista ezininzi zedomain ukuya kwiinkampani ezibambe amawaka eewebhusayithi ezingaziwayo- zenza ukudideka, buthathaka iimveliso kwaye ekugqibeleni zinqande iinkampani ukonwabela ubuchwephesha bobuchwephesha, obusebenzayo nobusebenzisekayo.
Ngaphambi kokuba inkampani ikwazi nokucinga malunga nokuphucula loo nyathelo, kufuneka ichaze ngokupheleleyo. Oko kuqala ngokwenza imephu ngokupheleleyo kwimpahla yedijithali yenkampani, akukho ntsingiselo kwi-xesha apho iinyani ezikwi-Intanethi zihamba rhoqo.
"Wazi njani ukuba zeziphi izinto omele uzenze ngaphandle kokuba uyazi into onayo?" Ubuza uRussell Artzt, umsunguli kunye ne-CEO yeDigital Associates. Nje ukuba unalo olu lwazi, ungathatha izigqibo zobulumko malunga nokulungisa imeko yedijithali. ”
faka Abahlobo beDijithali, Inkampani yentengiso yedijithali enceda abathengi ukuba baqonde imeko yabo yedijithali ngaphambi kokucebisa ngendlela. Kwintliziyo yeeDigital Associates kukuFunyanwa kweDomain, imveliso entsha ekwaziyo ukufumana yonke imimandla ebhaliswe kwinkampani ethile. Isebenzisa isiseko sedatha esinamandla esingaphezulu kwezigidi ezingama-200 zemimandla kunye neenkampani ezizizigidi ezingama-88, kunye nemimandla emitsha esisigidi eyongezwa veki nganye.
Ukufunyanwa kweDomain sisisombululo sesoftware esothusayo esijonga iinkampani ezizigidi ezingama-88 kunye neendawo ezingaphezulu kwezigidi ezingama-200 ezibhalisiweyo- nesigidi esongezwe kwiziko ledatha veki nganye- ukumisela umkhondo wedijithali wenkampani.
Ukuchaphazeleka kumashishini abo bonke ubungakanani, ukuFunyanwa kweDomain kusetyenziswa iziko ledatha yayo ukuze kuqondwe iinkcukacha, ubumbano lweenkampani ezingaphezu kwezigidi ezingama-88 kwihlabathi liphela-yonke into isuka kwiidilesi ze-IP ukuya kwiinombolo zefowuni ukuya kubaphathi beC-Suite -ukuchonga ubhaliso olunokubakho. ukuphoswa zizixhobo eziqhelekileyo zokukhangela indawo.
Nje ukuba inkampani iqonde ngokwenyani iiasethi zayo zedijithali, iiDigital Associates ziyakwazi ukuhlalutya ukusebenza kwenkampani kwi-Intanethi kwaye zenze isicwangciso sokulungelelanisa imiyalezo yentengiso, ukunciphisa iindleko zedijithali kunye nokwandisa inzuzo.
Zizo ezo nkampani ezinesiphatho ngokwenyani sendawo yazo yedijithali eya kuphumelela kuqoqosho lwangoku. Okwangoku, nangona kunjalo, iinkampani ezininzi aziqondi ukuba zincinci kangakanani izinto abanazo kwimpahla yabo yedijithali kunye nendlela yokuphumeza ezinye iitekhnoloji kunye nokulinganisa kungenza wonke umahluko.
tags: Abahlobo be-digitalukufunyanwa kwesizindaulawulo lwesizindakwimimandlaukulawula imimandla
Russell Artzt Monday, August 8, 2016
URuss Artzt ngumseki kunye ne-CEO ye Abahlobo beDijithali, Owathi kunye noVince Re, oyiNtloko yeTekhnoloji, baphuhlisa izisombululo zesoftware esekwe kwilifu ukunceda amashishini ayazi kakuhle imeko yedijithali.
Ngaba ii-emoji zipholile kunxibelelwano lwakho lwentengiso? ?